Qaran iyo Qabiil-Laba Aan Is Qaban Karrin.!!W/Q: Xuseen Adan Cige (Deyr): |
Qaran iyo Qabiil-Laba Aan Is Qaban Karrin.!!W/Q: Xuseen Adan Cige (Deyr):
W/Q: Xuseen Adan Cige (Deyr):
1) Kolba sida ay ummaddaasi meel ugaga soo wada jeestaan cadawgooda noocyada badan leh;
2) Ku dhaqanka iyo u hogaansanka Shuruucda, Xeerarka iyo Dastuurka Qaranka;
3) Ilaalinta Hantida Qaranka iyo wixii ay ummaddu wada leedahay;
4) La dagaallanka xaq-darrada, xumaanta iyo xiqdiga bulshada lagu kala qaybinayo;
1) Waxa hoos u dhaca Rajada iyo Filashada Bulshada ee xagga Mustaqbalka in ay Berri Maanta ka fiicnaan doonto;
2) Waxa hoos u dhaca asaaska iyo jiritaanka ummadnimo iyo Dareen-Wadareedka mideeya qaybaha kala duwan ee bulshada;
3) Waxa kobca kala-qaybsanaanta, Qabyaaladda, Hunguriga iyo Dan-shaqsi ka fikirka;
4) Xag Dhaqan, Xag Dadnimo iyo xag Diineedba, waxa luma ixtiraamka, karaamada, is-qadarinta iyo kala-dambaynta bulshada dhexdeeda;
5) Waxa timaadda xaalad ay ummaddaasi isku guubaabin waydo wanaagga, horumarka, runta iyo arrimaha u adeegaya danta guud ee bulshada;
6) Waxa timaada xaalad ay ummaddu ka dhiidhiyi waydo xaq-darrada maalin-laha ah, xumaanta iyo xiqdiga bulshada lagu kala qaybinayo;
(…….. LA SOCO QAYBAHA DAMBE)